Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 26/09/2020)
France bụ a mara mma mba na ọtụtụ ekwe omume na ebe maka a ọwa ma ọ bụ riverboat ezumike. A ole na ole nke France si na mpaghara kwụpụta n'akụkụ ahụ: na Midi, n'ógbè Aquitaine, na Camargue. Onye ọ bụla n'ime ha nwere àgwà ọma.
Nke mbụ bụ Canal du Midi, a World Heritage Site na ndị kasị ochie wuru waterway na Europe na ka ndị a mbụ ya N'ezie. Nke a na-arụ ọrụ nke Pierre Paul Riquet dechara na 1681. N'ụzọ, cruising ala Midi, ị pụrụ ịhụ Le Somail na Carcassonne, abụọ maa mma ochie niile. Ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ezigbo nri na oké mmanya, i nwere ike na-agbalị Midi ama Minervois na Corbieres, na cassoulet, a obodo delicacy.
Gịnị bụ karịsịa maa mma bụ na n'ụzọ ị pụrụ ịhụ pụtara obí eze, ochie castles, na quaint ochie obodo. Na ndị na-n'anya uwa ga-doro anya na-enwe emetọghị emetọ wilderness na richness nke anụ ọhịa.
Mgbe ahụ, e Ypres, a pụtara ebe jupụtara akụkọ ihe mere eme pụtara na pụrụ iche Flemish nlegharị anya, ụda, na flavors. Ụgbọ mmiri ụzọ gị na-atọ ụtọ Belgium ejiri mee chọkọletị, ma ọ bụ ewu ewu na siri ike Onye Belgium beers. The mba ga-anabata unu na-a dị ọcha ụtọ maka niile uche ziri ezi.
Ọ dịghị ndepụta kacha mma European ebe nwere ike zuru ezu na-enweghị Netherlands. Ahụ na-agụnye ebe ndị na-enye ihe kasị mma ọwa na riverboat ememe na Europe. Mba nke waterways nwere chọta ya ebe ke ndepụta, esighịkwa ya pụtara echiche, sinik ụzọ gasị na na ala na obi iru ala nke gara.
#canal #riverboat #njem europetrains eurotrip trainjourney